Nhema Garlic Extract Utano Hwakanaka uye Kushanda
Chii chinonzi Black Garlic Extract?
A dema dema rinobvisa Chimiro chegaliki chinotorwa kubva mukukweva uye kukwegura kwegariki nyowani. Kurapa kwegariki nyowani kuburitsa mutema gariki kunoitika pamhepo yakanyorova zvakanyanya nekushisa kwakanyanya kubva pa40 ° C kusvika 60°C kwemazuva gumi anokwana gumi.
Nemamiriro aya, iyo Garlic makore inokurumidza uye inotendeuka kubva kune chena kusvika kune rima / dema gira. Yakazara nehuwandu hwevhithamini akakosha nemaminerari akadai manganese, Vitamin C, Vitamin B6, Selenium, Vitamin B1, phosphorous, mhangura uye calcium.
Gariki yakasviba yakasviba rave inozivikanwa chikafu chinwiwa chinowedzera kwemazana emakore muThailand, South Korea, pamwe neJapan asi dzimwe nyika dzakaita seTaiwan, vakazvitora munguva yakapfuura, kunyanya mumaresitorendi akanyanya uye maresitorendi. Iyo inonyanya kushandiswa kuwedzera flavour kune zvakasiyana zvekudya, kusanganisira nyama inosanganiswa kumadessert, uye inoonekwa seyakanaka chikafu chinonhuwira chinowedzera nekuda kwemabasa ayo e antioxidant.
Kunze kwekuvandudza kuravira kwechikafu, mamwe matema egirazi rinobvisa mabhenefiti anosanganisira kurasikirwa nehuremu, kuvandudza hutano hweganda pamwe nemasimba immune system. Unogona kutenga akavirisa dema muto nenzira yemutema Gariki inobvisa poda, dema ndere rinobvisa mabhora kana dema gariki yekubvisa muto.
Nhema Garlic Extract Mechanism Yekuita
Yakasviba garlic inodzvinyirira ine inopesana-inorwadzisa mhedzisiro iyo yainozadzisa nekuderera HAPANA uye pro-yekuzvimba cytokine kugadzirwa muLPS-inosimudzira RAW264.7 maseru. Garlic's hexane chinhu chinowedzera maseru uye ICAM-1 uye VCAM-1 kutaura muTNF-α-yakagadziriswa endometrial stromal maseru mumuviri wako.
Iyo inowedzera inhibits, leukotrienes, pro-anogumbura cytokines pamwe nezviitwa zveiyo COX-2 uye 5-lipooxygenase mukati meLPS-inokwenenzverwa RAW264.7 maseru. Nekuda kweizvozvo, kumwe kuzvimba kunowedzera kushomeka kana kudzivirirwa kuitika.
Kana zvasvika pane oxidative chiitiko, dema gariki rine phenols uye flavonoids, ose ayo anoita basa rakakosha muNrf2 nzira yekuvhiya. Izvo zvakasiyana-siyana zvinopihwa negariki zvinowedzera mazinga ekutaura e mRNA mu antioxidant enzyme senge HO-1, NQO1, uye maGST. Makemikari acho, ayo anosanganisira tetrahydro-car-carboline inobvira, N-magadzirirwo glutamate, N-fructosyl arginine allixin uye selenium, zadzisa izvi kuburikidza neNrf2 activation.
Nhema Garlic Extract Production
Sezvambotaurwa, mutema gariki rinobviswa rinogadzirwa kubva kune nyowani nyowani nekuumbiridza yekupedzisira munzvimbo yakanyatsotongwa. Nzvimbo dzinofanirwa kuve dzakanyorova zvakanyanya (ne80 kusvika 90% hunyoro hwekunyorova) uye kupisa senge makumi mana °C kuti 60 °C. Munguva yekuita, mativi akasiyana akaumbwa semhedzisiro yeMaillard reaction.
Nekufamba kwenguva, kamwe kachena chena kabichi inosviba kuti ive chena rima. Dzinokudziridzawo tamu inotapira, syrupy, balsamic kuravira, chewy kutaridzika uye kunhuhwirira kwakasiyana.
Nguva yekurapa maitiro inosiyana kubva kune mumwe anogadzira imwe kusvika kune imwe asi kazhinji ichibva pamazuva mana kusvika makumi mana. Izvi zvinoenderana netsika uye zvido zvevagadziri pamwe nezvinangwa zvakatemwa neiyo mutema garlic.
Nekudaro, maererano nezvakawanikwa mune kumwe kuongorora, mazuva makumi maviri nemashanu akakwana kurapwa kwegariki kunoitwa pane imwe hunyoro hwe 21% uye kupisa kwe 90 70 °C. Maererano nekuongororwa, mamiriro uye nguva yekurapa inowedzera mikana ye antioxidant yezvigadzirwa zvinokonzeresa, nokudaro yakakwana muto egirazi inobvisa mabhenefiti.
Yakuda Garlic Extract Hutano Kubatsira
Kune vazhinji dema dema rinobvisa hutano hutano, Kusanganisira:
1. Nhema Garlic Extract Inobatsira Nehuremu
Zvakawanikwa zveimwe rat ratidziro yakaratidza kuti nhema dema inogona kudzikisa zvakanyanya huremu hwemuviri, saizi yakakora maseru uye mafuta emudumbu. Ichi chaive chiratidzo chakasimba cheangangoita mutema muto kuonda zvakanaka pakati pevanhu.
Hufakazi hunotsigirwa neongororo ichangobva kuitwa iyo inoratidza kuti kuisa mutema mutema kunogona kuvandudza kugona kwemuviri wako. Izvi zvinogona kubatsira kuti iwe ubvise uremu nekukurumidza nekuda kwehutano hwakanaka uye hwefizikisi.
Naizvozvo, kana iwe wakanyanya kuonda kana kuti uchingoda kuderedza huremu, funga kukwenya mutema mutema wekuremerwa uremu simba.
2. Yakasviba garlic inobatsira yeganda
Nhema gariki mabhenefiti eganda ari semhedzisiro yekuwanikwa kweS- allylcysteine ​​komponi mugariki. Iyo michina inoita kuti garikisi ishandise nyore kupa ganda rako uye nemuviri wako wese kudzivirira zviri nani kubva kuzvirwere.
Imwe yemabhuru madema inobatsira yeganda kudzivirira acne uye eradiation. Acne chirwere chebhakitiriya chimiro chinoratidzirwa nemavanga uye mabhonzo-kunge mapundu paganda rako. Iwo mapimpuru anoitika semugumisiro wekushatiriswa uye kuzvimba kwevhudzi rako follicles.
Nekuda kwenzvimbo yayo inorwisa mabhakitiriya, nekuda kweaicicin, mutema garandi rinotora rinouraya mabhakitiriya anokonzera Pamusoro pezvo, yayo yekudzivirira-kurapa inobatsira kudzikisa kuzvimba uye kuzvimba kwakabatana neacne.
3. Black Garlic Extract Inobatsira neMuviri cholesterol kuvandudzwa
Zvidzidzo zvesainzi zvakasiyana siyana zvinoratidza kuti mutema gariki inobatsira kuvandudza cholesterol muvanhu vari kurwisa hunyoro hwepamusoro cholesterol. Inowedzera yakakwirira-density lipoproteins (HDL), yakanaka cholesterol iri mumunhu. Zvimwe zvidzidzo zvinoti zvinodzikisawo mazinga e cholesterol yakaipa uye yakakwira triglycerides.
4.Black Garlic Extract Inobatsira Nekuvandudzwa kweropa
Yakasviba Garwe yakazara neasidhiulfur macomputer, dema gariki inobatsira zvakare mudziyo weropa kuzorora. Kuzorora uku kunotungamira pakuderedzwa kweropa sezvo ropa rine nzvimbo yakawanda yekufamba zvakanaka.
Muchidzidzo chakabatanidza varwere makumi manomwe neshanu vanetsinga yeropa yakawandisa, vaongorori vakawona kudzora kweropa kwakawedzera kwe 79 mm pakati pevarwere vakatora mapiritsi egariki. Varwere ava vakaiswa pamavhiki gumi nemaviri ekurapa regimen kwavanotora mapiritsi maviri kana mana madema egisheni mazuva ese panguva yese.
Inotakurwa ne antioxidants, dema dema inogona kupa zororo rakakura rekuzvimba. Izvi ndezvechokwadi kuti antioxidants inodzora masina kusaina, nekudaro inobatsira mukuderedza kuzvimba. Kunze kwezvo, ma-antioxidants anoregedza zvakasununguka zvakasununguka radicals zviripo mumuviri wako kuchengetedza masero emuviri kubva kune oxidative kushungurudzika izvo zvinokuvadza ivo, zvichizotungamira mukuzvimba.
6. Hutano bvudzi
Yakakura garandi mabhenefiti ebvudzi ave achizivikanwa kuvanhu kubvira nguva dzakare. Nhasi, mafuta madema egirazi ari kuwanikwa muzvitoro zvakawanda zvevhenekeri kuti ape vanhu vanoda kuchengetedza hutano nevhudzi rakanakira bvudzi. Oiri inotsigira kukura kwevhudzi nyowani, inomira bvudzi kudonha uye inoderedza kurasikirwa kwebvudzi painoshandiswa nguva dzose.
Nzvimbo yakasviba yakasviba inobatsira kune bvudzi kusimuka kubva pane chokwadi chekuti iyo garlic ine anti-utachiona utachiona, nekudaro kugona kurwisa hutachiona, hutachiona, fungus, pamwe nemahara. Naizvozvo, kana iwe ukaisa dema mafuta egirazi pane yako scalp, inogona kudzivirira izvo zvinokwanisika kuvaka-up kwezvinhu izvi zvisikwa. Nekuda kweizvozvo, bvudzi rako mavara uye ganda rakapora hutano.
Pamusoro pezvo, nhema gariki mabhenefiti ebvudzi anonzi anowanikwa kune iyo anti-anogumbura mhedzisiro yegariki. Iko kuiswa kweye nhema gariki bvudzi mafuta pane yako ganda remusoro kunogona kudzikisira kuzvimba uye kutsamwa kunofambidzana uye nekukurumidza kurasikirwa kwebvudzi mune dzimwe nguva.
7. Nhema Garlic Extract Inobatsira neCancer Kukura kwekudzivirira
Sekureva kwechidzidzo cheJapan chakaitwa muna 2007, kushandiswa kwegariki dema kunogona kudzikisa bundu remakonzo. Vanoongorora vanofungidzira kuti izvi zvinogona kuitika muvanhu zvakare. Iyi nzvimbo iri muchibvumirano neInternational Journal of Preventive Medicine's systematic review. Ongororo iyi inoratidza kuti kudyiwa kwegariki yakura kwakapesana nekukura kwegomarara.
Zvakare, a vitro kudzidza kwakaitwa mu2014 yakaratidza kuti yakaviriswa nhema gariki dhisiki inogona kudzikisira kenza yematumbu kukura kwesero uye kunyange kutsakatisa maseru ekenza.
8. Yakasviba Garlic Extract Ino Inosimbisa Hupenyu Hwakanaka Hutano
Hutano hwemwoyo kugadzirisa kuri pakati peanonyanya kuzivikanwa mutema gariki mushoma mabhenefiti. Mune 2018 yemhando yemhuka ichifananidza nhema yegariki kuburitsa mabhenefiti uye mhedzisiro yegariki mbishi pahutano hwemoyo kune munhu anopora, vaongorori vakaona kuti mafomu maviri egariki aishanda zvakaenzana mukuderedza kukuvara kwemoyo.
Kunze kwezvo, nekuda kwekugona kwayo cholesterol mvumo, yakavirirwa dema muto inogonawo kuderedza chirwere chemoyo.
9. Nhema Garlic Extract Inobatsira Nehutano hweBrain kugadzirisa
Pamusoro pezvo, mutema mutema unokwanisawo kukurudzira ndangariro dzako, kunyanya kana uchinge uchinetseka nemamiriro ekuziva akadai nechirwere cheParkinson, chirwere cheAlzheimer kana kunyange kuderera kwemusoro. Iwo ma antioxidants aripo mu anogona kuderedza kuzvimba kwakakonzera kana kwakabatana neaya mamiriro. Semhedzisiro, hutano hwehuropi hwako hunovandudzika, uine kugona kutemba kwekugona.
Imwe gariki inobvisa hutano hunobatsira
Sezvo madema egreen akatorwa anobatsira immune system, anokwanisawo kushanda kune:
Dziviriro yeshuga uye zororo
Prostate yekenza yekudzivirira uye kuzorora
Jock itch kurapwa
maronda-anokonzeresa kugaya utachiona
kudzivirira kenza yemapapu uye zororo
chest chest pain
kudzivirirwa kunotonhora uye kuzorora
Kusiyana Pakati Pevatema Garlic uye Garlic Yakachena
Nekuda kweMaillard maitiro ekuti Garlic yakanyorova ichipfuura kuti ive dema, hazvishamisi kuti mafomu maviri egariki aya akasiyana, kwete chete ane huchenjeri-hwerudzi, asiwo maitiro awo emakemikari uye kuravira.
Iko kuchinja kwekuravira kunonyanya kupiwa nekudzikiswa kwefransans (fructose uye glucose) mugalari panguva yekugadziriswa. Pakupedzisira, iyo yekuseri garlic inopera iine yakaderera fructan level pane iyo isina kugadziriswa gariki. Kufunga kuti fructans ndiwo akakosha flavors vagadziri, yavo yakaderedzwa uwandu, saka, zvinoreva kuti mutema gariki haichazoravidzi kupfuura mutsva.
Iko kunhuhwirira kweatambi akasviba ekubvisa hakuna kusimba senge nyowani yemarvin; iyo yekutanga inotapira, Kune rumwe rutivi, iyo yekupedzisira ine simba uye inonyanya kugumbura. Izvi zvinodaro nekuti mutema mutema une yakadzika allicin yezvinhu. Munguva yekukwegura, mamwe eacicin ari mutsva muhwende anoshanduka kuita antioxidant complements akadai diallyl sulfide, ajoene, diallyl disulfide, diallyl trisulfide pamwe nedithiins.
Nekuda kwekuchinja kwezvinhu zvehuicocochemical, mutema garandi rine yakakwirira bioactivity, semuenzaniso, antioxidant zvivakwa, pane nyowani nyowani. Iyo makomkati ari muiyo mutema gariki, senge S-allylcysteine ​​(SAC) inoshanda zvakanyanya kana ichienzaniswa nevaya vari mune nyowani nyowani.
Nekuda kweizvozvo, mutema gariki rinobviswa rakakwira mu-oxidants, makalori, fiber uye iron uye iron kana ichienzaniswa negariki yakasviba. Kune rimwe divi, Gariki yakasviba ine yakakwirira vhitamini C, carbs uye allicin pane yakagadziriswa fomu yegaliki.
Kuti uve unonyatsojeka, maviri masipuni egarlic ane magiramu 25, 3 mg sodium, 5.6 g makabhohaidhiremu, 1 g protein, 0.1 g mafuta, 0.4 g yekudyara fiber, 5.2 mg Vitamin C, 30 mg calcium uye 0.3 mg iron. Kusiyana neizvi, huwandu hwakaenzana hwegirazi rakacheneswa rine macalories makumi mana, 40g carbs, 4g protein, 1g mafuta, 2g yekudya fiber, 1mg sodium, 160mg iron, 0.64mg Vitamini C uye 2.2 milligrams calcium.
Nhema Garlic Extract Dosage
Kunyangwe iwe uchida kutora dema litsi yekubvisa mabhora, dema gariki inobvisa chinwiwa, kana dema gariki inotemwa ne bentong ginger, zvakakosha kuti iwe utevedze iyo inokurudzirwa dosi. Mukukanganiswa neatema gariki chigadzirwa chinhu chechisikigo, zvinogona kukonzera mimwe mhedzisiro kana ikatorwa zvakawandisa.
For dema dema rinobvisa hupfu kugadzira mutema mutema uchibvisa muto kana mutema gariki uchibvisa muto kana kuwedzera kune upfu hwako, shandisa zvine hukasha 1/3 tsp yeupfu kamwe pazuva. Uyu muyero unoshandawo kana iwe uchida kushandisa nhema gariki kubva kune bentong ginger. Ukasadaro iwe unogona kutevedzera chiremba wako.
Unoda kuziva kuti yakawanda sei mutema yekudya pazuva? Zvakanaka, hapana humbowo hwesainzi hwekunyatso kuona kuti yakadii garandi dema yekudya pazuva. Nekudaro, dzakasiyana zvidzidzo uye kuongororwa kwemushandisi zvinoratidza kuti 5-10 zvidimbu (clove) pazuva iri rinoshanda uye rakachengeteka mhando.
Kana iwe uchida kutora dema gariki dhonza mabhora kana mapiritsi, iyo- inonyanya kukurudzirwa muyero ndeye 200mg. Nezvenyaya yeBlack Garlic Bvisa Tonic Goridhe, yakakurumbira nhema nhema dhisiki muto, iwo unokurudzirwa muyero uri 70ml pazuva.
Yakuda Garlic Extract Njodzi?
Black giraidhi yekubvisa inowanzochengeteka zvakanyanya kuti idhakwe nevanhu uye kunyangwe topical application. Nekudaro, sekuwedzera kwemuromo, inogona kukonzera kutambudzika kwemudumbu, asi izvi zvinoitika mune mashoma mamiriro. Naizvozvo, kana iwe uine dumbu kana dumbu renhoroondo nhoroondo, zvakakosha kuti ubvunze chiremba wako kutanga usati watora chinotora kana chakabatana chinowedzerwa taura nyanzvi dzekudya paGoldBee.
Zvakare, hukuru hwemuromo hwemadonhwe ewakabviswa hauna kuchengetedzeka kuvana, nepo runyoro rwechichemo rwunogona kukonzera kupisa senge kukuvara paganda remwana. Kugadziriswa kwemusoro wepamusoro kunogona kukonzerawo kutsamwa kweganda kana kuchiitwa pamukadzi ane nhumbu.
Nhema Garlic Extract Chikumbiro
1. Kudya kwekuravira
Kungofanana negarlic yakasviba, dema rekusvinudza rinoshandiswa rinoshandiswa nekuda kwezvinangwa zvinowedzerwamo zvakasiyana-siyana zvinonaka. Izvo bumps inonaka kwechikafu.
Nekuda kweiyo antibacterial uye anti-immune mali, iyo inobviswa inoshandiswa sechinhu chakakosha mune zvakasiyana siyana zvigadzirwa zvekunatsa. Zvigadzirwa zveconic zvine zviripo zvinoshanda mukudzivirira kweacne kana kugadziriswa kwehutano hwebvudzi, pakati pezvimwe zvakanaka.
3. Hutano hwekuwedzeredza zvinowedzera
Yakasviba Garlic extracts inosimbisa immune system. Saka nekudaro, rinobviswa rinoshandiswa kugadzira zvinowedzera izvo zvinobatsira vanhu kuti vagare kure nezvirwere zvakasiyana siyana.
Nhema Garlic Extract Supplements
Diki yakasviba inobvisa zvinowedzera huya mune dzakasiyana siyana kusanganisira mutema gariki svutugadzike puru, dema gariki bvisa mabhora kana dema gariki bvisa muto. Imwe yeiyo supplements inoenda zita rekuti Black Garlic Extract Tonic Goridhe, inova yakasviba Garlic inobvisa muto.
Nhema gariki mushoma chibereko chekuviriswa mbishi gariki. Inowanikwa muchimiro che dema dema rinobvisa hupfu, dema ndere rinobvisa mabhora kana dema ndere rinoburitsa muto. Zvimwe zvezvikwaniriso zvekutora uku kwakavandudzwa kudzivirirwa kwemuviri, kudzivirira kurasikirwa nebvudzi, kugadzirwa kweganda nekuvandudzwa kwetoni uye uremu. Iyo yekudhirowa inoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana, zvinosanganisira zvemahara uye zveindasitiri yezvekushambadzira.
Banerjee S., Mukherjee PK, Maulik S. Garlic se antioxidant: Izvo zvakanaka, zvakaipa uye zvakaipa. Phytother. Res. 2003; 17: 97-106.
Ha AW, Ying T., Kim WK Mhedzisiro yevatema mutema (Allium satvium) inobuda pane lipid metabolism mumakonzo akadyiswa yakakwira mafuta ekudya. Nutr. Res. Dzidzira. 2015; 9: 30–36
Kang O.J. Kuongororwa kwe melanoidins inogadzirwa kubva kune yakasviba Gariki mushure mekasiyana yekushisa matanho. Prev. Nutr. Chikafu Sci. 2016; 21: 398
Kim DG, Kang MJ, Hong SS, Choi YH, Shin JH Antiinflammatory mhedzisiro yeanoshanda maforamu akasarudzika kubva kune vatema vatema Garwe. Phytother. Res. 2017; 31: 53-61
Milner J. Encyclopedia yezvokudya zvinowedzera. Marcel Dekker; New York, NY, USA: 2005 Garlic (Allium sativum) mapeji 229-240.
1.Chii chinonzi Nhema Garlic wabvisa?
2.Black Garlic Bvisa Mashandiro Ekuita
3.Black Garlic wabvisa Kugadzira
4.Black Garlic Bvisa Hutano Kubatsira
5.The Musiyano Pakati Black Garlic uye Fresh Garlic
6.The Musiyano Pakati Black Garlic uye Fresh Garlic
7.Black Garlic wabvisa Dosage
8.Iye Dema Garlic wabvisa zvine ngozi?
9.Black Garlic wabvisa Chikumbiro
10.Black Garlic Bvisa Zvokuwedzera
Nicotinamide Mononucleotide (NMN): Zvakanakira, Dosi, Kuwedzera, Kutsvaga
L-Ergothioneine (EGT): Kudya - Kwakatorwa Antioxidant ine Therapeutic Potential